कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने, लिङ्देनलाई डा. लोहनीको साथ « Image Khabar
कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने, लिङ्देनलाई डा. लोहनीको साथ
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार १४:५५
काठमाडौं, मंसिर १४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टीको भावी अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्ने भन्दै आफू लिङदेनको पक्षमा उभिएको बताउनु भएको हो । उहाँले आफू सहमतिबाट नेतृत्व चयनको पक्षमा रहे पनि त्यो सम्भव नदेखिकाले लिङदेनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष लोहनीले अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा र कमल थापालाई पनि लिङ्देलनलाई समर्थन गरी पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता लिङ्देनले आफूले उम्मेदवार घोषणा गर्दैमा कसैले अपमानित महसुस गर्नुनपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफ्ना उम्मेदवारी घोषणालाई देश बचाउने र राप्रपालाई एक नम्बरको पार्टी बनाउने अभियानको रुपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
राप्रपाको महाधिवेशन यही मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि नेता लिङ्देन र कमल थापाले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ ।
कमल थापाडा. प्रकाशचन्द्र लोहनीराजेन्द्र लिङ्देन